Inona no atao hoe ROTI? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny R	» ROTI
ROTI no fanafohezana ny Return on Technology Investment.
Mitovy amin'ny fiverenan'ny fampiasam-bola (ROI), izany no fotoana ilana fampiasam-bola amin'ny teknolojia na fahazoan-dàlana rindrambaiko hamerenana ny vola miditra amin'ny fampiharana. Ohatra: Ny fampiasam-bola amin'ity sehatra ity dia manana ROTI 7 volana ho an'ny mpanjifa antonony. Azo refesina amin'ny isan-jaton'ny fitomboan'ny fidiram-bola azo mihoatra izany